DHEGEYSO-Dowladda hoose ee Garoowe lagu dhaliilay go’aan ka gaarista dhulka lagu murmo. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Dowladda hoose ee Garoowe lagu dhaliilay go’aan ka gaarista dhulka lagu murmo.
Diseembar 20, 2016 1:20 b 0
Garoowe, Dec 20 2016-Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo kamid ah culimaa’udiinka ugu caansan deegaamada Puntland oo kahadlay masiibada boobka dhulka ee kajirta Garoowe ayaa sheegay in dowladda hoose aysan qaadan doorkeedii, islamarkaana odayaasha dhaqanku faraha kula jiraan.
Halkaan ka dhegeyso warbixin uu ka diyaariyey Maxamed Laki Man.
DHEGEYSO-Barlamaanka Puntland oo laalay labo kamid ah Hay’adaha dowliga ah.